कोभिड–१९ : मध्यपहाडी लोकमार्गमा कालोपत्रको काम ठप्प - नेपालबहस
कोभिड–१९ : मध्यपहाडी लोकमार्गमा कालोपत्रको काम ठप्प
| १२:०४:३९ मा प्रकाशित
२२ बैशाख, जाजरकोट । कोभिड–१९ बाट जोगिन र जोगाउन भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रको काम ठप्प भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको करिब ४२ किलोमिटर काम ठप्प भएको हो । जाजरकोट, रुकुमपूर्व र रुकुम पश्चिम गरी २१४ किलोमिटर सडक मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्दछ ।
लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका काम नरोक्ने सरकारी निर्णय भए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको काम मजदुर अभावकै कारण रोकिएको छ । रुकुम र जाजरकोट खण्डको काम रोकिएपछि तोकिएको समयमा निर्माण नहुने पक्का भएको छ । आयोजनाले रुकुम खण्डमा आगामी असार मसान्तभित्र कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । सानीभेरी–चौरजहारी सडकखण्डको ३२ किलोमिटर कालोपत्रको काम करिब एक महिनादेखि रोकिएको लोकमार्गको दैलेख आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोपत्र गर्नका लागि ठिक्क परेको काम रोकिएपछि समस्या भएको छ । रुकुमको ३२ किलोमिटर र जाजरकोटको १० किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्ने ठिक्क पारिएको भए पनि लकडाउनका कारण मजदुर नहुँदा काम रोकिएको छ । अन्य मेशिनबाट हुने काम जारी रहेको निर्माण कम्पनीले बताएका छन् ।
शर्मा सिंह एन्ड ब्रदर्स जेभीका विश्वास उप्रेतीका अनुसार कालोपत्र गर्नका लागि आधारभूत काम सकिएको थियो, कालोपत्र शुरु हुनै लाग्दा लकडाउन हुँदा काम रोकिएको छ । बाँकी कच्ची कटान गर्ने काम भने उपकरणमार्फत हुने काम भने चालु रहेको छ । जाजरकोट खण्डमा रहेको ८२ किलोमिटर सडकखण्ड मध्ये ५५ किलोमिटर शर्मा सिंह एन्ड ब्रदर्स जेभीले काम गर्ने ठेक्का पाएको छ ।
“अहिले मेशिनको काम मात्र भएका छन्”, उप्रेतीले भने, “अब दुई, चार दिनभित्र मेशिनको काम रोकिने सम्भावना छ, नेपालगञ्जबाट आउने सामग्री आउन छाडिसकेको छ । तेलको आपूर्तिसमेत ठप्प भएको छ ।” जाजरकोटको सबैभन्दा जटिल मानिएको छेडागाड नगरपालिकाको मन्ताभिरमा कटानको काम शुरु भएको उनले बताए ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको हासिवाङदेखि चौरजहारी र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको सिमानासम्मको काम रोकिएको छ । अग्ला ठाउँ सम्याउने, क्रसर र नालाको काम भने मेशिनमार्फत जारी राखिएको छ । उक्त खण्डसहित पहिले नै ठेक्का लागेका सबै सडकमा कालोपत्रको काम आगामी असार मसान्तसम्म सकिनुपर्ने हो ।
कालोपत्रको म्याद सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी भएकाले निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने पक्का भएको छ । बाहिरबाट आएका दक्ष कामदार लकडाउनका कारण फर्किएका छन् । यही वैशाख २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो भए बाहिर गएका कामदारलाई बोलाएर कालोपत्रको काम जारी राख्ने तयारी छ ।
अहिलेकै अवस्थामा रहेर काम गर्दा १० किलोमिटर कालोपत्रको काम असार मसान्तसम्म सकिने अनुमान छ । बाँकी २२ किलोमिटर कालोपत्र आगामी मङ्सिरभित्र गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । लकडाउनकै कारण मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बैरीदहदेखि पूर्वको क्षेत्रमा पनि कालोपत्र शुरु भएको छैन । त्यहाँ पनि उपकरणबाट हुने काम भने चालु छ ।
उपकरणभन्दा श्रमिकबाट गर्नुपर्ने काम धेरै भएपछि समस्या परेको निर्माण कम्पनीले बताएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गले रुकुमपूर्व र पश्चिमको १२३ किलोमिटर खण्ड ओगटेको छ भने जाजरकोटमा ८२ किलोमिटर रहेको छ । रुकुममा केही खण्डमा कालोपत्रको काम भइसकेको छ । त्यस्तै लोकमार्गका अरू सबै खण्डमा ठेक्का लागे पनि मुसीकोट नगरपालिकाको सेरीगाउँदेखि हासिबाङसम्मको १२ किलोमिटरमा बाँकी छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेक्का टुङ्गो लागे पनि सार्वजनिक गर्ने र सम्झौताको काम हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको काम रोकिएपछि स्थानीयवासी निराश भएको जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका–११ कालाभुरका धर्मबहादुर घर्तीले बताए । काम रोकिएपछि फुर्सदिलो भएर बसेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट ल्याएर काम गर्दै आएको छ ।
स्थानीय मजदुरलाई बाहिरबाट आएका दक्ष जनशक्तिले सिकाएको भरमा काम गर्दै आएका छन् । भेरी नदीमा निर्माण हुने भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको पुल निर्माण हुन नसकेर ठप्प भएको छ । अहिले लकडाउनका कारण झन समस्य भएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको आयोजना नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरको कामसमेत ठप्प भएको छ । बाहिर जिल्लाका मजदुर लकडाउनका कारण घर फर्केपछि डिपिआरको काम ठप्प भएको हो । रासस
ओली र ठाकुरबीच भेटवार्ता १ घण्टा पहिले
आज पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली ११ घण्टा पहिले
एमाले सांसद बसेको घरमा ढुंगा हान्ने २२ वर्षिय युवक पक्राउ ४ घण्टा पहिले
श्रीमानसँगै कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको मृत्यु ९ घण्टा पहिले
राष्ट्रिय खाद्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय आजबाट शुभारम्भ ९ घण्टा पहिले
दीपक मेहफिल लिएर बजारमा आए ४ घण्टा पहिले
दुई महिनाको अवधिमा काभ्रेका ३३ जङ्गलमा डढेलो ४ दिन पहिले
सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर नेपाल चिनाए : अनुश्मा २ दिन पहिले
भ्यान अनियन्त्रित भई पल्टँदा दुईको मृत्यु ४ दिन पहिले
तत्काल लकडाउन नगर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय २ दिन पहिले
भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्याको १ लाख नाघ्यो ३ हप्ता पहिले
एसपी प्रवीण र सीडीओ पिताम्बर काठमाडौं तानिए २ हप्ता पहिले
व्यवसायिक रुपमा पालिएका कुखुरा ६ दिन पहिले
उपाधिकालागि भिडदै नेपाल र बंगलादेश, खेल हेर्न प्रधानमन्त्री ओली रंगशाला जाने ! ३ हप्ता पहिले
बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा सामान्य बृद्धि ४ हप्ता पहिले
‘कविर सिंह’ पछि महगो बनेकी कियरा ३ हप्ता पहिले
हल्का बर्षासँगै वायु प्रदुषण पनि घट्यो २ हप्ता पहिले
लकडाउनको मौकामा सर्लाहीबाट व्यापक तस्करी: व्यापारी र प्रहरीको साठगाँठ १० महिना पहिले
पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले पाए भ्रष्ट्राचार आरोपबाट सफाई ९ महिना पहिले
चियाको लिलाम बिक्री केन्द्र निर्माण भएन ८ महिना पहिले
ग्रिजमेन र डेम्बेलेको गोलमा बार्सिलोना विजयी ४ महिना पहिले